सोधेकै भरमा कोरोना नेगेटिभ ! - बडिमालिका खबर
काठमाडौँ — नुवाकोट शीतलबेसीकी सुनिता कार्की ८ महिनाकी गर्भवती छिन् । नियमित परीक्षण गराउन शुक्रबार काठमाडौं आइपुगिन् । बाटैबाट चाबहिलस्थित घरबेटीलाई फोन गरिन् । ‘घरमा आउन त आऊ तर, टेकुमा कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै आऊ’ भनेपछि कोठामा नगई उनी सिधै टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्तपाल पुगिन् ।
‘कोभिड परीक्षण नगरी अरू अस्पतालले उपचार गर्दिएन । टेकुमा पनि किट नै छैन भनेर परीक्षण गर्दिएनन्,’ नन्दलालले भने, ‘कोभिडको महामारीको बेला हामीलाई परीक्षण गर्दिनुस् भन्दा पनि किट छैन भनेर फर्काइन्छ । अस्पतालमा जाउँ उपचार गर्दैन । घर जाउँ छोरालाई ज्वरो हनहनी छ, अब कहाँ लैजाऊँ ?’ टेकु अस्पतालले मुकेशलाई कोभिड–१९ को लक्षण नभएको कागज लेखिदिएका छन् तर नन्दलाललाई भने परीक्षण नगरी चित्तै बुझेको छैन । ‘दुई दिन धाउँदा पनि परीक्षण भएन,’ उनले भने ।
लकडाउनलगत्तै चन्द्रिका भण्डारी र दुई छोरी काभ्रेको कोसीपारिस्थित घर गए । उपचार गर्नुपर्ने भएकोले १८ दिनअघि वैशाख ११ मा काठमाडौं फर्किए । टेकुनजिकैको चल्खु टोलको कोठामा सिधै गए । तर, टोलबासीले उनीहरुलाई घरमा छिर्नै दिएनन् । घरबाट ल्याएको झोला बोकेर टेकु अस्पतालमा परीक्षण गर्न पुगे । ज्वरो नापेर कोरोनाको लक्षण नभएको भन्दै चिकित्सकले फिर्ता गरे । फेरि त्यही कागज लिएर उनीहरु कोठामा पुगे । तर, टोलबासीले डाक्टरको सिफारिसलाई वास्ता गरेनन् । ‘रगत जाँचेको रिपोर्ट ल्याउन भनियो,’ चन्द्रिकाले भनिन्, ‘त्यो दिन हाम्रो कोरोना परीक्षण भएन । कोठामा छिर्नै नदिने भएपछि हिँडेर ललितपुरको ग्वार्कोस्थित छोरीको घरमा गयौं ।’
अपांगता भएकी चन्द्रिका बैशाखीको सहारामा १४ गते बिहानै फेरि टेकु अस्पताल आइपुगिन् । आफ्नो समस्या सुनाइन् । चिकित्सकले आरडीटी गरिदिए । नतिजामा कोराना नेगेटिभ देखियो । त्यही रिपोर्टका साथमा छोरीहरुसँगै कोठामा गइन् । ‘हाम्रो रिपोर्ट हेर्न टोलभरिका मान्छे जम्मा भए । यो रोग भनेको १४ दिनपछि पनि देखा पर्छ । फेरि १४ दिनपछिको रिपोर्ट लिएर आउनू, अनि मात्रै छिर्न दिन्छौं भनेर फर्काए । यो रिपोर्टले पनि कोठामा पस्न दिएनन्,’ चन्द्रिकाले भनिन्, ‘कोठामा छिर्न नदिएपछि हिँडेरै छोरीको कोठामा घिस्रिँदै पुगें ।’
१४ दिन बितेको भन्दै उनी आइतबार फेरि अस्पताल पुगिन् । साढे ५ किलोमिटर बाटो तीन घण्टा लगाएर अस्पताल आउँदा उनीजस्तै परीक्षण गराउनेको लामो लाइन थियो । छोरीलाई लाइनमा राखेर उनी थकाइ मार्न बसिन् । परीक्षण गर्न दुई जना चिकित्सक पीपीई लगाएर बसेका थिए । उनीहरुले १४ दिन अघिको रिपोर्ट देखाए । अनि चिकित्सकले सोधे, ‘फेरि किन आउनुभएको ?’ टोलका मान्छेले १४ दिनपछिको रिपोर्ट ल्याएपछि मात्रै कोठामा छिर्न दिन्छौं भनेकाले आएको उनले ती चिकित्सकलाई सुनाइन् । ‘तपाईंहरु विदेशबाट आएको पनि होइन । यस्तो मान्छेलाई किन यसरी दु:ख दिएको ? लक्षण देखा पर्‍यो भने आउनु नत्र बिनाकाममा नआउनू भन्नुभयो । परीक्षण पनि गर्दिनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘डाक्टरले त यही कागज लिएर घर जानू भन्नुभयो । तर, कोठा वरिपरिका मान्छेले बुझ्दिँदैनन् ।’
चिकित्सकले कोरोनाको लक्षण नभएको भन्दै लेखेको कागज लिएर उनीहरु कोठामा तर विवाद सुल्झिएन । काठमाडौं–१२ का पदाधिकारी आए । चिकित्सकले लेखिदिएको रिपोर्ट हेरेपछि मात्रै उनीहरुलाई घर छिर्न दिइयो ।
कोरोना परीक्षण गर्न कुन दिन कति आए ?
सोमबार : ५६ जना
मंगलबार : १०० जना
बुधबार : ९१ जना
बिहीबार : ६२ जना
शुक्रबार : १२४ जना
शनिबार : ५४ जना
आइतबार : १४९ जना
हिजो मृत्युसंग नडाएको योद्धा ओली, आज कुर्सी गुम्छ कि भनेर किन डराउने??
शंका उत्पन्न हुन लाग्यो, भारतले भुमि नमिचेर सरकारले बेचेको त होइन